Chekutanga shanduro yakagadzika yeApricity OS inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi tinofara kuzivisa kuwanikwa kweiyo yekutanga shanduro yakagadzika yeApricity OS, chaiyo vhezheni 07.2016 iyo yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza.
Apricity OS isisitimu yekushandisa yakatorwa kubva kuArch Linux uye nekudaro, ine iyo Rolling Regedza yekuvandudza system. Iyi yekuvandudza system inounza zvidiki diki nguva nenguva (semuenzaniso, mwedzi wega wega), izvo, kana uchinge uri mudiki, hazvikumanikidzire kuti ufomatire PC kuti ichengetedzwe Nenzira iyi, isu tichakwanisa kuve necomputer kusvika padanho pasina zvakanyanya kuyedza.
Kugoverwa uku inomira kuve yekuparadzanisa kwakaringanasezvo iine dhizaini isina chairo muziso remunhu. Iwo madhesiki ayo ane basa rekugadzira ayo graphical interface basa ndeyekusarudza pakati peGnome 3,20 neCinnamon 3.0.7. Kana iri iyo kernel, isu tine linux 4.6.4 kernel seye system kernel.
Nezve mapurogiramu, Apricity OS inosanganisa Arch Linux repositories yepakati software, iine yayo repository kune mamwe marudzi emapakeji. Pakati pemapakeji akakosha mukati meyako repamhepo tine icon uye fund mapakeji, mapakeji ekuchengetedza uye yakachinjwa Google Chrome ine mamwe mawedzera-ons pakati pevamwe.
Iye munhu anotarisira kuita ruzhinji rwekuiswa kwesoftware uyes iyo Calamares software, software inokutendera kuti uite iyo grafiki graphic, pasina kuisa mirairo kana kushandisa iyo koni.
Hapana mubvunzo iri nyore asi inoshanda sisitimu yekushandisa, inokwanisa kumhanyisa mafomu mazhinji pamusika pasina kurasikirwa nehunyanzvi. Izvo chaizvo zvinoyeuchidza nezvekuparadzirwa kweSpanish Antergos, kugovera kunoenderana neArch Linux ine zvakafanana maficha kuApricity OS.
To download yazvino vhezheni yakagadzika yeiyi inoshanda system, tichazviita kubva kune yayo yepamutemo peji, umo matinogona kusarudza pakati peiyo Gnome vhezheni neCinnamon vhezheni, pamwe neshanduro dzakasarudzika dzevanogadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chekutanga shanduro yakagadzika yeApricity OS inowanikwa
Zvakanakisa, tichazviedza, ndinonzwisisa kuti padiki padiki pamatafura ari kuenda kuunzwa, ini ndakanyanya kde, zvakadaro, inofanira kunge iri kugovera kwakanaka, kwaziso.
Iyo pendi yakanyatsonaka, ndine gadget yangu yandakasiya ndiri munzira yekupihwa zvipo, ini ndinongoda kuti ndigadzirise kune Hardware (hard disk) uye nesisitimu inoshanda, ndezvipi zvinodiwa kuti ishande zvakanaka?
Pindura kuna Chemanuel
4 zvinhu zvekuita mushure mekuisa Debian